WOWOW Kitchen Sink Faucets Na-agbadata Ngwakọta Nickel
Home / Faucets kichin / Wetuo mmiri / WOWOW Kitchen Sink Faucets Sere Down Nickel Akpụkpọ anụ
gosiri 5.00 nke 5 dabeere na 40 ahịa Fim
(40 ahịa reviews)
Otu eriri ite mmiri faucet elu arc nwere uru ndị a: ntụgharị 360, nhicha mgbanwe na-enweghị akụkụ nwụrụ anwụ n'akụkụ niile;
Mmiri ka adaba, mmiri ọkụ na mmiri oyi nwere ike ịfegharị n'efu;
Nwere ike ijikwa ọnọdụ uche gị. Ihe mgbapu igwe anaghị agba nchara igwe ihe eji eme ihe, dị mfe ịwụnye, nnukwu okpomọkụ na mgbochi nguzogide, ịka nká.
Ktchen pịa jiri dọpụta mpekere 2310700
Kedu otu n’ime ihe dị mkpa kichin gị dị? Ọtụtụ ga-aza mgbata kichin ka a na-eji ihe a ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Ọzọkwa, a na-ahụkarị mmiri mmiri kichin dị ka isi ihe gbasara kichin. N'agbanyeghị ụdị kichin gị. Maka ihe ụfọdụ, mgbanaka kichin jidere uche onye ọ bụla. Ọbụna ihe mere ị ga-eji họrọ kichin kwesịrị ekwesị maka imewe kichin ọhụrụ gị. Nhọrọ na-ezighi ezi nwere ike wepu ogo niile na kichin gị, ma ọ bụ ị nwere ike họrọ kichin nke ekwesighi ka mmasị n'ihe ị na-atụ anya na arụ ọrụ. Na mmechi, amam-ihe adighi adi iche-iche. Otu nwere ike ịhụ ihe dị na kichin dị mma bụ nke ọ na-abụghị.
Ma olee otú i si achọpụta ịdị mma? Shouldkwesiri iji mgbata kichin ruo ọtụtụ afọ iji nwee ike ikpe ikpe ma ọ bụrụ na ogo nke ụlọ ịsa ahụ karịrị ogo ma ọ bụ. Nwere ike ịchọpụta nke a na oge akwụkwọ ikike nke ndị na-emepụta kichin na-enye gị. Onye na-eweta ngwaahịa na-enye ikike nke afọ 1 nwere ike ịtụ anya ụfọdụ nsogbu mgbe afọ ole na ole gachara. Maka nke a ọ chọghị ịnye oge ikike ogologo oge iji chekwaa ego efu. N’aka nke ọzọ, onye na-eweta kichin nke na-eweta a
Oge afọ ikike, tụkwasara ngwaahịa ya obi na ọchọrọ ịnara ọrụ ya maka arụmọrụ ya n'afọ niile ahụ. Ndị mmadụ nwere ike jụọ, kedu ihe kpatara na akwadoghị afọ 5? Ọfụma, arụmọrụ nke ụlọ ịsa kichin dabere na ojiji ya, mmezi ya na oke mmiri. Talọ erimeri na kichin nwere ike iru ihe karịrị afọ iri, mana ijikwa mmiri na njikwa mmiri dị mma iji gosi na ogologo ntachi obi dị ogologo.
Wepu aka na kichin fesaa
Ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịdọpụta kichin esi ebe eji eme ọfịs ihe karịrị kichin ọ bụla ọzọ. Isi ihe kpatara ya bụ na ịnwere ike iru isi ihe ọ bụla na ma ọ bụ gburugburu ebe ị na-asa. N'ụzọ dị otú a, nhichapu kichin gị enweghị ike ịme ngwa ngwa site na mgbata kichin ọzọ. Site na nsị mmiri ị nwere ike ịgbatị iru gị na sentimita iri abụọ na abụọ n'akụkụ nke ọ bụla. Tap nwere ebe ị na-esi nri kichin nkịtị ị gaghị enwe ike iru ebe a, yabụ ọ ga-abụ ihe na-enye gị nsogbu ihicha. Site na mgbanye ebe a na-adọrọ adọrọ ma ị ga-ehichapu kichin gị na ntabi anya.
Nnukwu uru nke igwe dọpụtapụtara kichin kichin bụ na ọ mara mma n'anya ma ọ naghị esiri gị ike ịchọpụta na ị nwere oghere ị na-egwu mmiri nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 4'11 ”. Taplọ ọrụ a na-adọrọ adọrọ na WOWOW dị nnọọ ka mgbata kichin nkịtị. Ọbụlagodi na i lere anya nke ọma, ị gaghị enwe ike ịhụ ihe dị iche site na mgbata kichin ọkọlọtọ. Ma mgbe ị dọtara isi ịgba nke a dọpụta na kichin fesa kichin, ị na-achọpụta na mberede na ị nwere ihe mgbapụta mmiri dị gị n'aka. Ogologo ya ga-eju gi anya! Mgbe ejiri mmiri hose mmiri, ọ na-eweghachi onwe ya ozugbo ọ dị na mbụ ya, dị ka ihe ọ bụla emebeghị. Ọrụ a dị mma na-arụ ọrụ ya na ọnụ mmiri ya na-agbanwe agbanwe na okpokoro dị arọ, e mere ya n'ụzọ dị ịtụnanya, ị ga-achọpụta otu mgbe.
Mgbata rụkwaa arụmọrụ nwere mmịpụta ejipụta
Likesnye na-enwe mmasị idebe isi nri kichin? Ọ dịghị onye anyị ga-eche. Nlezi agbanyeghị ka ọ dị n'ezie. Iji ụlọ mposi, ihe ndozi kachasị mkpa ị ga-arụ bụ ịsacha ya nke ọma. N’ezie mmadụ kwesiri iwepu unyi mgbe osi nri si na kichin pụta. N'ụzọ dị otú a, ị na-edebe mkpuchi kichin ka ọ bụrụ nke kachasị mma. Dị ka nke a, pọpụ mmiri kichin gị na-aga n'ihu dị ka ọ ka dị ọhụụ. Ọzọkwa, ọ dị mkpa iji wepu nsị niile mmiri siri ike na kichin na-agbanye. Karịsịa mgbe ị bi na ebe mmiri siri ike karịa ka ọ dị. Nke a pụtara na mmiri nwere ọtụtụ nzu. Nke a na-ahapụ ụfọdụ nsị na kichin ahụ mgbe ọ bụla ejiri ya. Nke ahụ abụghị nsogbu ma ọlị, ọ bụrụhaala na ị na - ehicha ya ugboro ugboro.
Ọ bụrụ na ịmeghị, chalk ga-ewuli elu mgbe niile, n'ikpeazụkwa, ọ gaghị adị mfe iwepu ọzọ. Nke a nwere ike imetụta arụmọrụ nke valves, levers na spray nke tap kichin. Karịsịa mgbe ị nwere dọpụta kichin pịpị esi nri, ị nwere ike ịchọ ihicha kichin gị kpamkpam ugbu a. Nke a na-agba mbọ hụ na ewepụrụ nsị niile n'ụzọ dị mfe yana kwesịrị ekwesị iji kwe gị nkwa ịdịte ndụ gị nke ogologo oge ị dọpụta kichin kichin.
Ndị ọrụ na-ewepụta mgbata kichin fesa
E wezụga ọrụ a, ụlọ ịsaị ọmalịcha emepụtara bụ nke a haziri nke ọma. Ardị dị elu dị elu na-enye gị elegancy na ohere bara uru n'otu oge. Emechara nickel achara na-enye ọpụpụ kichin fesa kichin ụlọ a. Ọ dabara na ụlọ oriri na ọ orụ restaurantụ ọ bụla ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ hotelụ wouldụ ọ bụla, mana na kichin gị ọ ga-enye n'ezie nke ahụ ị na-achọ.
Banyere arụmọrụ, ọpịpị a na-ekesa kichin nwere mmiri atọ iji nye gị nkasi obi ị na-achọ mgbe ị na-ehicha kichin gị. Nwere ike ịkwụsịtụ iyi mmiri ahụ site na iji bọtịnụ pụrụ iche na isi mmiri. N'ụzọ dị otu a, ị gaghị emetụ onye na-etinye ọnya aka aka mgbe ịchọrọ ijide mmiri naanị otu sekọnd. Enwere ike iji aka ya na-ejikwa ya rụọ ọrụ iji mezie mmiri mmiri na nrụgide mmiri. Site na ntụgharị ogo ogo 360 nke ime ụlọ kichin ị nwere ike iru ebe niile.
Akwụkwọ ikike weputara mgbanye kichin ịgba
E ji ihe-ọla dị elu mee ebe a na-emepe emepe kichin esi were rụọ ọrụ dị elu. Ya mere WOWOW nwere obi ike ịnye gị oge ikike 5 afọ na 90 ụbọchị ego azụ nkwa. Obi ike anyị ga-ekwenyerịrị na uru ego anyị na-enye gị ga-enyere gị aka wee dọpụta kichin fesa kichin a.
Ihe bara uru nke kichin ahụ site na iji dọpụta ya n’ohere:
Ihu mbara gbasaa n'ihi mmịpụta amịpụtara
G Mara mma ma na-pere mpe
Functions Ọrụ atọ dị mfe maka mmiri
Technology Ezigbo ihe nkwụghachi azụ
SKU: 2310700 Categories: Faucets kichin, Wetuo mmiri Tags: Wetuo, Naanị aka, ịgba
1x WOWOW Kitchen Foset (50cm Hot & Cold Water Hoses, 1.5m High Pressure Pressure Resistant PEX Hose), Ngwa: Rubber, Gasket, Nut, 1x Manual Manual, 1x Weight, 1x 8 inch Deck Plate
Enwere m obi ụtọ na ngwaahịa a. Ekwenyere m na nke a bụ China mere, mana m nọ n'etiti ọkpọkọ kichin. M dochie a aha ika foset na aha ọzọ ika foset na nwere dochie ahụ n'ime 2 afọ ruru ka imecha cracking apụ. Ihe na-erughị otu afọ mgbe nke ahụ gasịrị, njikwa ahụ mere ya ọzọ. Kama itinye ego 4 ugboro ole m mere maka ọkpọkọ a, echere m na m ga-azụta ihe a maka oge ahụ. Achọrọ m oge maka nyocha, mana ọchọrọ m ọkpọkọ ọrụ. Mgbe ọ bịarutere, ọ tụrụ m n'anya na ogo ụlọ ahụ, ebe ọ bụ na ọ dịkarịa ala ogo ụlọ na aha m. Akụkụ ahụ dị mma, mana echeghị m ịzụrụ akụkụ ndị ọzọ bụ nhọrọ. N'ikwu ya, maka ọnụahịa a, echere m na nke a bụ nhọrọ enwere ike iwepụ mgbe ọ mebiri. Ọ bụrụ na ọ nọrọ m otu afọ, obi ga-adị m ụtọ. Ruo ugbu a, dị mma. Ọ na-arụ ọrụ flawlessly na echichi bụ ezigbo ọkọlọtọ / mfe maka onye ọ bụla bụ kemfe. Echichi were m ihe dị ka otu elekere, mana oge ka ukwuu bụ oge na-ehicha n'okpuru ebe a na-asa mmiri ma na-ewepụ ọkpọ mmiri ochie. Enwere m nke a ihe dị ka ọnwa 2 na mmiri ịgba mmiri dị mma na ọrụ abụọ. N'ihi na nke a bụ isi nwere ike iwepụ, agbakwunyekwara m mgbakwunye ọzọ na sooks iji hụ na itinye ebe kwesịrị ekwesị mgbe ịchekwaara ya na ogwe aka. N'ịbụ onye enyemaka, a na-echekwa ibu ahụ nke ọma, dị mma karịa ọkpọ mmiri nke m na-amị amị. Nke a dị mkpa n'ihi na isi spayer enweghị magnetized sprayer na ibu bụ ihe na-echebe ya. N'ozuzu, Obi dị m ụtọ na mma ụlọ, ihe ịchọ mma, na atụmatụ maka ọnụahịa ọnụahịa a. Nke a bụ nnukwu uru. Aga m akwado.
Naanị m dochiri onye wuru m kwalite Moen foset ($ 260) site na WOWOW Kitchen Faucet Single Handle Kitchen Sink Faucets with Pull Down Sprayer in Brushed Nickel Commercial. Ọ bụ ezie na Moen dị ọhụrụ (ụlọ ọhụrụ) ọ jọgburu onwe ya iji.
Nke a WOWOW foset mara mma, dị mma ma dịkwa mfe iji. The WOWOW bụ akụkụ ka mma karịa nke Moen na ọnụahịa asọmpi n'ezie. Ntinye ahụ dị nchebe ma ọ gaghị atọpụ.
Mgbe m nọrọ ọnwa 4 na-agba mgba iji nweta ọnọdụ okpomọkụ ma na-asọ m oge ọ bụla m na-eji kichin kichin, m na-amụmụ ọnụ ọchị na ọ dị mfe ịtọlite ​​mmiri mmiri ma na-asọ asọ dị mma na njikwa dị mma.
Onye na-agbapụta ihe na-arụ ọrụ dị ka ọmarịcha wee laghachi n'olu olu na-enweghị ịkwanye ya n'ụlọ,
Ise kpakpando nile gburugburu
Wowow Faucet rutere ngwa ngwa ma tinye ya na ntukwasi obi ka ihe ọ bụla wee ghara ịcha ma ọ bụ dọọ ya. Igwe mmiri ahụ mara mma! Ọ bụ oge a ma sie ike. Ezigbo mma na nnukwu uru. Ntinye dị mfe na ọkpọkọ ọkpọ mmiri 3 dabara n'ụzọ zuru oke na mmiri ochie anyị. Igwe mmiri a na-enyekwa anyị ike mmiri ka sie ike. M hụrụ ya n'anya! M ga-azụta ọzọ foset anyị ụlọ ịwụ ahụ na-ele anya na nke a ụlọ ọrụ mbụ dị ka ha nyere magburu onwe ahịa ọrụ dị ka nke ọma.
Nke anyị mere agadi pere ezigbo mpe. Igwe kichin kichin na-egbu ya. Achọpụtara m na ọkpọkọ ọkpọkọ dị ọnụ ala karịa ọtụtụ ụdị ndị ọzọ ama ama. Igwe mmiri ahụ ji ngwugwu zuru ezu na ntuziaka ahụ .Mgbe wụnye dị mfe ma ịkwesịrị iji ndidi na-eme ya. Isi ịgba na-ejide ya site na ibu arụnyere n'okpuru sink. Mmiri mmiri na-agbanwe ma dị mma. Ọ dị mfe ịchịkwa. O toro ogologo. Nke ahụ bụ akụkụ kachasị amasị anyị. Ọ dị ezigbo mma ịsacha ihe niile.
Adị m afọ 64 ma nwee ịwa ahụ n'olu 2 n'ihi na ịnọ n'okpuru ụlọ ọrụ bụ ọrụ siri ike nye m mana dịka onye bụbu onye mmiri, anaghị m ada mbà! Tinye dị ka o kwere ọnụ ọnụ tupu wụnye! Nke ahụ bụ ụzọ amamihe!
Wepụta nke ọzọ wee bido hichaa elu ebe a na-ehicha ma gaa ọrụ!
Ọ BR you na ị bụghị ezigbo mma, onye ọrụ aka, n'ihi na enweghị ezigbo ntuziaka, ana m atụ aro Plummer ma ị nwere ike ịme ya.
Ọ bụ ọkpọka mara mma ma dị ebube! My nwunye hụrụ ya n'anya dị ka m. The ọzọ kichin foset naanị kere 6 afọ! Enwere m olileanya na nke a ga-adịru ogologo oge, ogologo oge ka ọ dị ọfụma!
Nke a kwatuo kichin foset na-eme ka anyị jiri mmanya mmanya gbadaa ala nke oge a. Pulu mmiri dị mfe iji wụnye. Ọ na-amasị m ntụgharị ntụgharị ogo 360 m nwere ike ịdọrọ iji saa nkuku ọ bụla nke sink. Ọzọkwa, otu ịwa ahụ na-eme ka ndụ m dị mfe. M nwere ike ịgbanwe mmiri okpomọkụ rụọ ọrụ nke ọma. Maka ego m kwụrụ, ọkpọkọ mmiri a kwesịrị.
E tinyewo ọkpọkọ a ihe dị ka otu ọnwa n'ụlọ m ugbu a & bụrụkwa nkwalite magburu onwe ya maka kichin anyị. Ntinye adịghị mfe dịka o kwesiri ịdị ebe ọ bụ na hoses ndị ahụ dị mkpụmkpụ - m ga-enwetakwu hoses na mgbakwunye iji rute pọmpụ mmiri
Igwe mmiri ahụ dị mma, nke dị arọ, nke siri ike, nke dị n'ime (opekata mpe ihe m nwere ike ịhụ), ogologo ogologo ma dịkwa nro. Ga-ahụ ogologo oge ọ ga-anọ. Ga-alaghachi melite m kwuru ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla nke.
Achọpụtara m na ha bulite vidiyo ntinye na nso nso a, nke doro anya. Ga-ele ya anya tupu echichi.
My atọ: dokwesighi ịwụnye na njikwa n'akụkụ. N'ezie m na-ahọrọ na arụnyere na ahụ dị n'ihu, ọ dịghị nsogbu ọzọ. Ajụrụ m mmadụ ka o nyere m aka ịwụnye. Echichi n'ezie dị mfe. Mana nsogbu m bụ na enweghị m akụrụngwa ka m ga-akwụ ụgwọ pọmpụ nke mbụ, nke tara nchara nke ukwuu.
Enwere m obi ụtọ na ọkpọkọ ọkpọ mmiri ọhụrụ m! Naanị m maara na ha bụ ndị $ 130 erughị nke ọma ama aha ụdị otú m ga na-agbalị. Ntinye dị mfe ma ọ dịghị mkpa ịkpọ onye ọkachamara. Ọkpọkọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Maka $ 70 n'ezie enweghi ọtụtụ mkpesa.
M kwụrụ dị ka $ 80? Ahụla m ihe ọkpọkọ yiri nke $ 120 na ndị ọzọ. Ejiri m oge elekere na-adọpụta nke ochie, mana nke a abanye na nkeji 10 ma ọ bụ karịa. Ntụziaka ahụ edoghị anya, mana agbanweela m karịa ole na ole na achọghị ha. Mee ngwa ngwa, ọ dị mma, ọ dị ụtọ!
Eji m ya dochie pọmpụ m kichin. Ntinye dị mfe. Otu njikwa nwere ike ime ka mmiri gbanyụọ n'ọnọdụ ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ dị ọkụ ma ọ bụ oyi ka ọ na-emegide ọkpọkọ mmiri ochie, nke Delta mere, ebe mmiri na-agbanyụ mmiri na njikwa naanị na ọnọdụ canter. Nwere ike ịhọrọ ịgba ma ọ bụ ogologo na bọtịnụ ịkwụsịtụ. Nwere ike wepu spout ebe ọ bụla na sink na-eme ka ọ dị mfe ihicha.
Na eche na nke a bụ ihe bara uru. Ejiri nickel kpochara, ihe yiri nchara nchara. Otu ihe na-amasị m banyere ọkpọkọ bụ na e nwere ogologo eriri mmiri ị nwere ike ịdọrọ maka ebumnuche ọtụtụ ojiji. Aka dị ntụsara ahụ. Ezi ihe eji eme tubing.
Enweela nke a maka ọnwa ole na ole ugbu a ma ọ na-arụ ọrụ dị ebube. Ha wụnye dị mfe. Enwere oge siri ike iwepu nke ochie. Nke a bụ onye arụnyere na nkeji ma na-arụ ọrụ kemgbe ahụ.
Enwere m obi ụtọ na ọkpọkọ ọkpọ mmiri ọhụrụ m! Ntinye dị mfe ma ọ dịghị mkpa ịkpọ ọkachamara. Enwere m mmasị na ihe niile gbasara ya, ihe na-adọta ala, ịdị elu, nrụgide mmiri m rịrị elu! Enweghị m ike ịtụgharị ya ihe niile gbawara mgbe m na-esi nri maka na m ga-enwe nnukwu ọgbaghara! Ha nwekwara ikike ikike agbatịkwuru nke na-egosi na obi siri ha ike na ngwaahịa ha.
Ntọala dị mfe, yana ntuziaka na-abaghị uru; nwere ike izigaghị ntụziaka ma ọlị. Na nke a na-ekwu n'ezie ọmarịcha ọkpọkọ na ezigbo ọnụ ahịa.
Ihe eji esi ihe eji esi nri kichin dị mfe iji. Ogo dị oke mma, ọ dị mfe ijikwa mmiri.Ọ dị mfe iji, ọ masịrị m nke ukwuu.
Ejiri m plọmba iji wụnye ebe ọ bụ na enweghị m ngwaọrụ pụrụ iche iji kwatuo ọkpọkọ mmiri ochie ahụ. Ahụrụ m ezigbo ọrụ na mma nke ọkpọkọ a.
Igwe mmiri ahụ dị elu ma na-arụ ọrụ nke ọma, ikike ịgbatị udọ ndị ahụ na-eme ka ọ baa uru karịa ka ọ bara uru maka nhicha. Ihe eji eme ya bu nke kachasi nma, ma o nweghi ike ihụta ntuhie a. M lovin ya!
Hụ ọkpọ a n'anya. M na-eme m kichin na a ọhụrụ foset bụ elu na ndepụta. Igwe ọkpọ a egosiwo na ọ bụ naanị ihe m na-achọ.
Ihe mgbochi m ugbu a dị ka nke ochie na nke ochie, mana achọghị m itinye ton iji dochie ya. Foseti na fixtures na-esi na pricey, ma nke a bụ nnọọ ezi uche dị ọnụ ma na-ese nnọọ ka a otutu nke elu ọnụ nhọrọ. Wụnye were m obere oge, mana n'ozuzu, enwere m obi ụtọ na ngwaahịa a.
Ọ ga-agbatị usoro m ma n'ụlọ ochie. Ngwaahịa ka mma mgbe ahụ m chere. Ọ dị mma karịa nke m zụtara maka nsị ọzọ site na ụlọ ahịa ngwaike.
Ntuziaka nwere ike ịbụ ntakịrị ihe karịa mana ụfọdụ vidiyo vidiyo nyeere aka. Enweghị m ahụmịhe mbụ ma jisie ike nweta anya ojii na nchi ma ọ dị oke mma. Na-eji ọnwa ole na ole na enweghị nsogbu.
*** *** n2020-08-07
Obi dị m ezigbo ụtọ na mmiri mmiri a! Dị mfe ma kwụ ọtọ iji wụnye. Na-arụ ọrụ dị ukwuu na ọ dịghị ihe na-adị ọnụ ala. Na-adị ukwuu ma na-arụ ọrụ ebube! Ukwuu nwere ike ikwu!
Ọ dị ezigbo mma ma dịkwa mfe ịwụnye, mara mma dị ka agba, ọ dabara m taịl na kichin m.
Ọ dị mfe ịwụnye M hụrụ ya n'anya na ọ nwere 3/8 ′ piping ka ị wee ghara ichegbu onwe ya banyere igbochi ya na wayo ma ọ bụ calcium dị ka ọtụtụ ihe nchekwa nchekwa mmiri ọhụrụ na-eme.
Enwere m ọkpọkọ kichin ochie, m na-edochi ya, ọ na-amasị m nnukwu ọkpọ a, ọ dị mfe ịwụnye ị nwere ike ịme ya n'onwe gị yana ịnwe ezigbo uru.
Nnukwu ihe ijuanya! M hụrụ n'anya imewe, anya na obi na-adị nke ojiji maka ọkpọkọ. Ihe ewuru na sprayer di nma !! Achọpụtala m na nrụgide mmiri dị mma karịa ọkpọ mmiri nke gara aga nke bụ ihe ịtụnanya mara mma.
Ntinye dị mfe. Aga m akwado onye ọ bụla ịzụrụ ịzụta ya.
Enwetara m ọkpọ mmiri ahụ ụbọchị ole na ole. Di m wụnye ya ụnyaahụ. Dị nnọọ mfe echichi. Ọ bụ ezigbo ihe. Anyị wụnye a foset na anyị kichin sink. Ọ dịghị eri mmiri ma ọ bụ nghọta. Ihe a masịrị anyị.
Wonderful foset maka ego !! Enweghị nsogbu nsogbu anyị. Na-arụ ọrụ dị ukwuu ma dị oke mma.
M *** r2020-08-20
Ntuziaka pere mpe iji kwado usoro nrụnye mana akụkụ niile ejikọtara yana nke ọma yana ọrụ niile dị mma.
Zụta ụgbụ a ihe dị ka ọnwa isii gara aga ma nwee afọ ojuju maka otu o si arụ ọrụ ma ọ dị mma
Enyochare m tupu ịzụta ya. Ahịrị a na-ekpo ọkụ dị mkpụmkpụ karịa nke dị ugbu a nke m nwere. Enweghị nsogbu, anyị nwetara ndọtị na Ace. Dị mfe iji dochie. Ọ dị ka ọ dị mma, eruba siri ike. Aga m akwado igwe mmiri a.
Ngwaahịa zuru oke maka ọnụahịa ahụ. Ọnụ ahụ na-adọta ala ngwa ngwa. Anyị nwere plọmba wụnye n'ihi na pọmpụ anyị dị nso na mgbidi kabinet.
Anyị ejighị n'aka na mbụ dịka anyị anụtụbeghị banyere ika a mana anyị kpebiri ịnwale dabere na nyocha niile. Obi dị anyị ezigbo ụtọ na ọkpọkọ mmiri a. Ogo dị mma, anya dị ukwuu, na-agagharị nke ọma, ọnụahịa dị ukwuu na nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Anyị enweela ya ihe dịka otu ọnwa ugbu a, anyị enweghị ike inwekwu obi ụtọ.
M mkpa dochie m ochie kichin foset na m na-eche na onye a bụ nke zuru okè oke. Ọ na-abịa na efere 3 oghere maka nke ochie m. Enwere vidiyo na ibe wowow iji zie ụzọ ịwụnye. Ọ ga-ewe 15 nkeji iji wuchaa ngwa. Mmiri mmiri dị ezigbo mma ma sie ike.
Enwere m ike ịhọrọ, na-eme ọtụtụ nyocha ma na-achọkarị maka aha aha na ọ bụghị mgbe ala, n'ihi ya, m mere ezigbo nyocha nke ọma tupu m gbakwunye aha aha a na-amaghị ama na ndepụta m nke ụdị ndị ama ama. yiri imewe na ihe karịrị okpukpu abụọ ma ọ bụ ugboro atọ na-eri. Abụọ ndị ọzọ na-akpata nchegbu: 1. A ole na ole reviews kwuru kpọdara ala adịghị retract na snap azụ n'ime ebe kwesịrị ekwesị, ekpe na-atụgharị. Nke ahụ bụ n'ezie okwu nwụnye. Enwere ibu dị mkpa ka a gbanwee, nke dị mfe, mgbe ahụ ọ na-arụ ọrụ zuru oke. 2. Agba - foto gosipụtara ya ka ọ dị ka agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba aja aja aja aja, mana ọ nwere site na nickel na-egbuke egbuke, nke nwere ike ịnwe agba aja aja na-ekpo ọkụ nke m na-echegbu onwe ya agaghị adaba na ngwa ngwa SS m. Enweghi m ike ịchọta nyocha ọ bụla na-ekwu banyere akụkụ ahụ ma ọ bụ na ajụjụ ndị ahụ, n'ihi ya, m jụrụ ajụjụ ahụ n'onwe m wee nata nnukwu azịza na-agwa m na ọ nweghị agba aja aja na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma na igwe anaghị agba nchara. Nke ahụ ghọrọ ezigbo ndụmọdụ, daalụ maka ndị ahụ wepụtara oge iji zaa ajụjụ m, eweghị m iwe. Nke a bụ a siri ike àgwà ngwaahịa, imewe na kwadoo ala na ịgba mma bụ ihe magburu onwe ya, m sinks dịtụbeghị ọcha! Naanị ihe m na-enweghị ike ịgwa okwu bụ ogologo ndụ n’ihi na ọ bụ naanị otu ọnwa, mana ka ọtụtụ kichin kichin, ọ na-arụ ọrụ mgbe niile, enweghị m ihe kpatara m ga - eji chee na ọ gaghị adịgide otu ihe ahụ. Nnukwu nhọrọ, gaa maka ya, chekwaa $, enwere m obi ụtọ ịkwado na kpakpando 5.
Mgbe m nyochachara ihe mbụ m, ndị ahịa m kpọtụrụ m ka m nyere aka dochie pọmpụ ahụ na-ezighi ezi n'agbanyeghị na ọ gafere windo WOWOW na-alaghachi. Site n'enyemaka ha enwere m ike ịrụzi pọmpụ ahụ mana ka ọ dị ugbu a, ha kwupụtara zigara onye nnọchi anya agbanyeghị na enweghị m ike idozi nke mbụ. Nsogbu bụ na nhazi nke dị n'ime ya kwere ka njikwa ahụ na-agagharị n'otu akụkụ iji dozie okpomọkụ ma ọ bụghị elu na ala iji mepee mmiri ahụ. Ọ dị mkpa ka ewepụ ya ma nọdụ ala ka ọ were rụọ ọrụ nke ọma. Igwe mmiri ahụ na-arụ ọrụ ugbu a dịka atụ anya ya ma anya ahụ bụ ihe m chọrọ. Kpakpando 5 maka ọrụ ndị ahịa nke ụlọ ọrụ a!
Original: Igwe mmiri a mara mma ma ọnụahịa ahụ ziri ezi, ọ dị mwute na ọ naghị arụ ọrụ. Ọ dịghị mmiri na-apụta. Aka ahụ na-emegharị akụkụ gaa n’akụkụ iji gbanwee n’etiti ọkụ / oyi ma ọ naghị agbago na ala iji mepee pọmpụ ahụ. Ahụla m ihe ndị ọzọ na-ajụ na ajụjụ gbasara enweghị mmiri yabụ echere m na ọ nwere ike ịbụ okwu ọgbakọ na ụfọdụ ihe. Ejikọtara njikọ niile ahụ n'ụzọ ziri ezi ma gbanyekwa valvụ ntinye. Dika ihe akaebe ozo na mmiri di ma di na achoputara m na mmiri si na hoses puputa mgbe m kwusi uzo. Ebe ọ bụ na azụrụ m ya ọnwa ole na ole gara aga maka ime ụlọ m na-asa ákwà m rụchara nke emechaala, enwere m nnukwu ndakpọ olileanya na enweghị m ike iji ọmarịcha pọmpụ a ma ugbu a windo nloghachi agwụla ka ọ dị m ka m rapaara na ya.
Anyị kichin foset na nso nso a nwụrụ na anyị nyere iwu a ọkpọkọ dị ka onye nnọchi, obi ụtọ na anyị ga-enweta ya dịtụ ngwa ngwa na-enwe ike wụnye ya na ngwụsị izu a ka anyị wee maliteghachi iji kichin sink. Otú ọ dị, mgbe anyị meghere igbe ahụ, anyị hụrụ ozugbo nnukwu nchacha na njedebe na akụkụ mmiri ogologo nke ọkpọkọ ahụ. Ihe a doro anya na okwu QC dika ọkọ ga-emecha nchara, ọ bụghị ikwu na ọ dị njọ. Anyị na-enwe oke nkụda mmụọ n'ihi na anyị anaghị eji ụlọ ịsa nri anyị eme ihe ruo mgbe anyị nwere ike nweta nke ọzọ. Nke a bụ nnukwu nsogbu. Enweghị m ike ikwere ihe dị ka nke a na-ejideghị n'oge nyocha nke ọma tupu ejiri ngwaahịa ahụ ziga! Nnọọ nkụda mmụọ dị ka anyị n'ezie na-atụ anya ka wụnye a kichin foset na-enwe anyị sink elu na-agba ọsọ ọzọ!
Mmelite: Emelitere nyocha anyị site na 1 ruo 5 kpakpando n'ihi ezigbo ọrụ ahịa anyị nwetara mgbe anyị debanyere nyocha mbụ anyị. WOWOW nwere ike bụrụ ndị ahịa kachasị mma anyị natara n'aka ụlọ ọrụ ọ bụla. Ha zitere anyị ọkpọkọ na-enweghị ntụpọ site na onye ozi si DHL na China nke bịara na ụbọchị ole na ole yana obere efere oche, sikwa China site na DHL. Ozugbo anyị nwetara foset arụnyere na anyị hụrụ ya n'anya, ọ dị mma ma na-arụ ọrụ nke ọma. Ọzọkwa, WOWOW gafere n'ezie iji mee ka ọnọdụ a dị mma maka anyị na ndị ahịa ha masịrị anyị nke ukwuu.
Nke a ọkpọkọ bụ nnọchi nke 15 afọ "ika aha" otu ahụ unit na esiri-ala ịgba isi. Igwe mmiri a malitere ịmịpu mmiri na mgbakọ valvụ na ọkpọ ahụ ma achọghị m ịnwale ịrụzi ndị ahụ. Emefu 2.5 - 3 awa wepụ ochie ahụ… corrosion na yipụ eri mere ka akụkụ a nke ọrụ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịgbanwe. Nke ahụ na usoro ihe eji arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ochie mere maka ọtụtụ ọbara, ọsụsọ, na anya mmiri n'akụkụ m.
N’aka ozo, etinyere uzo ohuru ma lee ihe dika nkeji 35. Njikọ abụọ nwere njikọ maka ntinye na-ekpo ọkụ na oyi na otu nnukwu njikọ njikọ maka eriri mmiri ka mmiri zoo interface… voila, emeela.
Jide n'aka ma tinye teepu akara Teflon na njikọ ntinye ọkụ / oyi; etinyeghị ya na ngwugwu. Edere ntuziaka ndị a n'ụdị nke Outer Mongolian nke a sụgharịrị n'asụsụ Bekee ga-eme ka nsogbu ụbụrụ na-ada na onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ụtọ asụsụ ọ bụla, ya bụ "Nwụnye nrụnye na nnwale ule ma ọ bụ na ọ bụghị." Obi dị m ụtọ na ihe atụ ndị ahụ dị ezigbo mma na -eme ka okwu ọnụ bụrụ ihe dị oke mkpa… mana ka na-atọ ọchị.
Ihe niile gụnyere na nkwakọ ngwaahịa (ma e wezụga teepu akara); efere escutcheon, gaskets mapụtara, mpempe allen, na ihe ntanetị 3/8 na 1/2 maka njikọ ọkụ / oyi (ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa)
Emechaa ihe niile ae kwuru, ọkpọkọ ọhụrụ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma na ọmarịcha mma nke ochie. M ga-akwado ya nke ukwuu ma gbakwunye na ọnụahịa ahụ ruru ihe dị ka $ 75 - $ 100 na-erughị aha aha kwekọrọ. Ọ bụrụ na nke a dịruru dị ka nke ọ dochiri, obi ga-adị m ezigbo ụtọ.
Enwere m obi ụtọ na ọkpọkọ ọkpọ mmiri ọhụrụ m! M nọ n'oké mkpa na amaghị ihe ọ bụla banyere fosets, dị nnọọ ole na ole nke ika aha. N'ime nyocha m, achọpụtara m WOWOW na nyocha ọ bụla dị iche. Naanị m maara na ha bụ $ 100 erughị nke ọma ama aha ụdị otú m ga na-agbalị. Ntinye dị mfe ma ọ dịghị mkpa ịkpọ ọkachamara. Enwere m mmasị na ihe niile gbasara ya, ihe na-adọta ala, ịdị elu, NA nrụgide mmiri m rịrị elu nke ukwuu! Enweghị m ike ịtụgharị ya ihe niile gbawara mgbe m na-esi nri maka na m ga-enwe nnukwu ọgbaghara! Ka m kọọrọ gị mgbe Home Depot nwere nnukwu ọrịre ụbọchị 4 ka m wụnyechara ọkpọkọ mmiri ọhụụ m achọghị ịchọ. Ha nwekwara ikike ikike agbatịkwuru nke na-egosi na obi siri ha ike na ngwaahịa ha.
WOWOW Pot Filler Faucet Nke dị n'elu Nchekwa Chrome